Catie muMeowmeowLand: komedhi yakagadzirwa kuita mutambo wevhidhiyo | Linux Addicts
Isaac | 10/05/2022 10:51 | Linux Mitambo
Catie muMeowmeow Land inzira nyowani yekusekesa ikozvino iri kuuya kuLinux. Iwo mutambo wevhidhiyo umo iwe unozongonongedza nekudzvanya, asi inokupa nguva dzakanaka dzekuseka kana iwe uchida rudzi urwu rwemhando. Pasina kupokana, zvakakodzera kutamba uye kuyedza iyi mhando yezita iri kure neyakajairwa. Mugadziri wayo ARTillery akakweva hungwaru kugadzira iyi dhizaini, uye ikozvino vaitawo nhamburiko yakanaka yekukuunzira chiteshi chewaunofarira distro.
«Catie muMeowmeowLand mutambo wakanaka wechinyakare we point uye tinya adventures akaiswa munyika isinganzwisisike yekatsi uye vanhu vanoseka. Sezvo Catie anotevera katsi chena isingazivikanwe mubindu rake, anoerekana azviwana ari munyika isinganzwisisike yeMeowmeowLand, kwaanofanira kutanga rwendo rwekudzokera kumba. Basa rako ndere kubatsira Catie kusvika ikoko!»vakataura muNdP nezvekuzivisa kwekutanga uku.
Uye hongu, kana iwe uri kufunga kuti zita iri rinokuyeuchidza nezvaAlice muWonderland, chokwadi ndechekuti vagadziri vayo vakafemerwa nazvo kuti vagadzire zvauri kuona izvozvi.
Catie muMeowmeowland akatanga kuburitswa macOS uye Windows masisitimu anoshanda mumwedzi waKurume, uye kunyangwe yanga isiri budiriro inonzwika sevamwe, yakakwanisa kuwana mamakisi akanaka pakati pevashandisi vakaiedza paSteam, inoita seinovimbisa. Iye zvino vashandisi veLinux vachakwanisawo kuyedza zita iri uye vape maonero avo nezvazvo. Zvakare, kunyangwe iwe uchida rudzi urwu kana kuti kwete, zvinogara zvakanaka kuona vagadziri vakawanda vachifarira uye kunetseka kugadzira yeLinux.
Kudzokera kuCatie kuMeowmeowland, zvinhu zvakatanhamara zvemutambo uyu wevhidhiyo ndezvi:
MeowmeowLand inyika isingazivikanwe kwaunosangana nevanhu vazhinji vasingatarisirwi zvachose uye unosangana nemamiriro asingafungidzirwe aungafungidzira.
Sezvo iwe uchibatsira Catie kugadzirisa nhevedzano yemapuzzle ayo acharatidzwa, nekungonongedza nechitubu chako uye nekudzvanya, iwe unozotarisana nemamiriro ezvinhu asina musoro uye anonakidza, sezvo iine nguva dzinonakidza dzenyambo.
Iyo ine anopfuura makumi maviri nemana akadhonzwa nemaoko e24D mamiriro ekutamba.
Anopfuura zana anosetsa mavara epasi rino.
Anopfuura maawa maviri e2D animation akagadzirwa nemaoko.
Manzwi anonakidza uye epakutanga akarekodhwa kune mavara.
Nziyo dzakagadzirirwa kunyanya zita iri.
Iwe haufanire kuverenga anofinha mameseji mabhokisi, iwo mavara anozotaurirana necomic bubbles.
Dzidza zvakawanda nezve Catie muMeowmeowLand uye dhawunirodha - Chitoro cheStam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Catie muMeowmeowLand: komedhi yakagadzirwa kuita mutambo wevhidhiyo
Ubuntu 21.10 (Impish Indri): Kuuya Kumagumo eRutsigiro Munguva pfupi